စပွန်ဆာရလို့ ကားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ နန်းမွေစံ - Cele Platform
စပွန်ဆာရလို့ ကားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ နန်းမွေစံ
ကမ္ဘာ ကျော် နယူးယောက်ခ်တိုင်းသတင်းစာမျက်နှာပေါ်အထိ ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ မော်ဒယ် ဆရာဝန် နန်းမွေစံဟာ လိင်ဆွဲဆောင်မှုအသားပေး မော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် ပွင့်လင်းရဲတင်းစွာ ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒီရပ်တည်ချက်ကြောင့်ပဲ မကြာသေးခင်က သူ့ရဲ့ဆရာဝန်လိုင်စင် ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့အဖြစ်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဒီယာတွေအထိဟိုးလေးတကျော် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
နန်းမွေစံဟာ မကြာခင်ကပဲ သိန်းလေးရာကျော်တန် ကားသစ်တစ်စီး ၀ယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီး အနုပညာအလုပ်နဲ့ဝင်ငွေမရှိဘဲဒီလိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အပေါ် ဝေဖန်ရိုက်ခတ်မှုတွေကြီးမားစွာရှိခဲ့ပြီး စပွန်ဆာပေးခံရတာလား သို့လော သို့လောမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ သူ့ကိုအားပေးချစ်ခင်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် နန်းမွေစံတစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်သလဲ? ဒါကို ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် အခုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။
” မွေစံ့ကိုအလေးထားတဲ့ ပရိသတ်လေးတွေ တစ်ယောက်ပဲရှိရှိ နှစ်ယောက်ပဲရှိရှိ မွေစံ့အတွက်အင်အားပါပဲ။ အနုပညာရှင်တွေဆိုတာ ပရိသတ်တွေရှိမှ အလုပ်လုပ်လို့ရတာလေ။ ပရိသတ်တွေများလေလေ မွေစံကပျော်လေလေပါပဲ။ အဲ့ဒါ ဘာမှမစားမသောက်ရနဲ့ကို ဗိုက်ပြည့်စေတာပါ။
” ကားက အမေရိကန်ဘရန်းကိုကြိုက်လို့ လဲဖြစ်တာပါ။ ဘယ်လောက်မှလဲမရှိပါဘူး။ သူများတွေလို အကောင်းစားကြီးလဲမစီးနိုင်ပါဘူး။ မာစီဒီးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ သိန်း လေးရာကျော်ကျော်လေးနဲ့ဆိုတော့လေ။ စပွန်ဆာလဲမရှိဘူး။ ဘာမှမရှိဘူး…ဒီအတိုင်းပဲ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဝယ်တာ… အဲ့ဒါ သူများတွေအထင်မှားမှာစိုးလို”
” မွေစံက အိမ်စီးပွားရေးလဲရှိတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေလဲ လူမသိတာပဲရှိတယ်။ ကြော်ငြာလေးတွေရှိတယ်။ နယ်ပွဲတွေမှာသီချင်းဆိုတယ်။ မွေစံအနေနဲ့ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် မွေစံ့ပရိသတ်တွေက စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့အရင်လိုပဲပြန်အားပေးလို့ရပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ စပွန်ဆာကိစ္စပတ်သက်မှု ဘာမှမရှိပါဘူး”
” မွေစံပိုက်ဆံမမက်ဘူး၊ ငွေလုံးဝမမက်ဘူး။ ငယ်ငယ်လေးထဲကပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတယ်။ ငွေနောက်လိုက်မှာမဟူတ်ဘူး၊ အနုပညာသီးသန့်ကိုဖန်တီးမှာပါ။ စိတ်ကူးထားတာတွေရှိပါတယ်။ ပရိသတ်စိတ်တိုင်းကျတင်ဆက်ပေးမှာပါ၊”
“နိုင်ငံခြားသတင်းတွေမှာအထိ ဖော်ပြခံရတာကတော့ သူတို့က ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖော်အချွတ်တွေရိုက်လို့ လိုင်စင်အသိမ်းခံရတာကို စိတ်ဝင်စားသွားကြတာ။ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဲယူဆပါတယ် ”
” ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့မယ့် ဗီဒီယိုတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေဆက်တင်သွားမှာပါ။ အခုနယ်သီချင်းဆိုပွဲတွေ ဆက်တိုက်သွားနေရ လို့ မတင်ဖြစ်တာပါ။ သီချင်းမဆိုတတ်ပေမဲ့ ငှါးတော့သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။”ALinnMyay
ကမ်ဘာ ကြျော နယူးယောကျချတိုငျးသတငျးစာမကျြနှာပျေါအထိ ဖျောပွခွငျးခံခဲ့ရတဲ့ မျောဒယျ ဆရာဝနျ နနျးမှစေံဟာ လိငျဆှဲဆောငျမှုအသားပေး မျောဒယျတဈဦးအဖွဈ ပှငျ့လငျးရဲတငျးစှာ ရပျတညျခဲ့သူဖွဈပွီး ဒီရပျတညျခကျြကွောငျ့ပဲ မကွာသေးခငျက သူ့ရဲ့ဆရာဝနျလိုငျစငျ ပိတျသိမျးခံရတဲ့အဖွဈဟာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီဒီယာတှအေထိဟိုးလေးတကြျော နာမညျကွီးသှားခဲ့ပါတယျ။
နနျးမှစေံဟာ မကွာခငျကပဲ သိနျးလေးရာကြျောတနျ ကားသဈတဈစီး ဝယျခဲ့တယျလို့သိရပွီး အနုပညာအလုပျနဲ့ဝငျငှမေရှိဘဲဒီလိုဝယျယူခဲ့တဲ့အပျေါ ဝဖေနျရိုကျခတျမှုတှကွေီးမားစှာရှိခဲ့ပွီး စပှနျဆာပေးခံရတာလား သို့လော သို့လောမေးခှနျးထုတျစရာဖွဈခဲ့တာပါ။ သူ့ကိုအားပေးခဈြခငျနကွေတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ နနျးမှစေံတဈယောကျ ဘယျလိုဖွရှေငျးလိုကျသလဲ? ဒါကို ခဈြပရိသတျကွီးအတှကျ အခုတငျဆကျပေးပါရစေ။
” မှစေံ့ကိုအလေးထားတဲ့ ပရိသတျလေးတှေ တဈယောကျပဲရှိရှိ နှဈယောကျပဲရှိရှိ မှစေံ့အတှကျအငျအားပါပဲ။ အနုပညာရှငျတှဆေိုတာ ပရိသတျတှရှေိမှ အလုပျလုပျလို့ရတာလေ။ ပရိသတျတှမြေားလလေေ မှစေံကပြျောလလေပေါပဲ။ အဲ့ဒါ ဘာမှမစားမသောကျရနဲ့ကို ဗိုကျပွညျ့စတောပါ။
” ကားက အမရေိကနျဘရနျးကိုကွိုကျလို့ လဲဖွဈတာပါ။ ဘယျလောကျမှလဲမရှိပါဘူး။ သူမြားတှလေို အကောငျးစားကွီးလဲမစီးနိုငျပါဘူး။ မာစီဒီးလဲမဟုတျပါဘူး။ ဒါ သိနျး လေးရာကြျောကြျောလေးနဲ့ဆိုတော့လေ။ စပှနျဆာလဲမရှိဘူး။ ဘာမှမရှိဘူး…ဒီအတိုငျးပဲ ကိုယျ့ပိုကျဆံနဲ့ကိုယျဝယျတာ… အဲ့ဒါ သူမြားတှအေထငျမှားမှာစိုးလို”
” မှစေံက အိမျစီးပှားရေးလဲရှိတယျ။ အနုပညာအလုပျတှလေဲ လူမသိတာပဲရှိတယျ။ ကွျောငွာလေးတှရှေိတယျ။ နယျပှဲတှမှောသီခငျြးဆိုတယျ။ မှစေံအနနေဲ့ဘာမှမလိုအပျပါဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ မှစေံ့ပရိသတျတှကေ စိတျရှငျးရှငျးနဲ့အရငျလိုပဲပွနျအားပေးလို့ရပါတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။ စပှနျဆာကိစ်စပတျသကျမှု ဘာမှမရှိပါဘူး”
” မှစေံပိုကျဆံမမကျဘူး၊ ငှလေုံးဝမမကျဘူး။ ငယျငယျလေးထဲကပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနရေတယျ။ ငှနေောကျလိုကျမှာမဟူတျဘူး၊ အနုပညာသီးသနျ့ကိုဖနျတီးမှာပါ။ စိတျကူးထားတာတှရှေိပါတယျ။ ပရိသတျစိတျတိုငျးကတြငျဆကျပေးမှာပါ၊”
“နိုငျငံခွားသတငျးတှမှောအထိ ဖျောပွခံရတာကတော့ သူတို့က ဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ အဖျောအခြှတျတှရေိုကျလို့ လိုငျစငျအသိမျးခံရတာကို စိတျဝငျစားသှားကွတာ။ ကိုယျ့အတှကျကောငျးဖို့ဖွဈလာတယျပဲယူဆပါတယျ ”
” ပရိသတျတှအေကွိုကျတှမေ့ယျ့ ဗီဒီယိုတှေ၊ ဓာတျပုံတှဆေကျတငျသှားမှာပါ။ အခုနယျသီခငျြးဆိုပှဲတှေ ဆကျတိုကျသှားနရေ လို့ မတငျဖွဈတာပါ။ သီခငျြးမဆိုတတျပမေဲ့ ငှါးတော့သှားဖွဈတယျပေါ့နျော။”ALinnMyay
ထင်မှတ်မထားရလောက်အောင်ကို နုပျိုလှပနေသေးတဲ့ မေသန်းနု
အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ရုပ်ရှင်တွေရော ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုပါ လက်ခံထားပြီဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး